काठमाण्डौमा भित्रि सडकमा साना सवारी र मोटर साइकल गुड्न` थाले, मानिस`को पनि ला`ग्न थाल्यो भिड !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/काठमाण्डौमा भित्रि सडकमा साना सवारी र मोटर साइकल गुड्न` थाले, मानिस`को पनि ला`ग्न थाल्यो भिड !!
काठमा`डौँको भित्री सडक तथा गल्लीमा भने मानिसको भीडभाड कायमै छ । त्यहाँ सामा`जिक दूरी समेत कायम गरेको पाइएको छैन । पछिल्लो समयमा उपत्यकामा पनि साना सवारी र मोटरसा`इकलको चाप बढ्दो छ । पैदलयात्रुसमेत बढिरहेको पाइन्छ ।
मुख्य सडक, गल्ली तथा भित्री सडकमा अनाव`श्यक भीड`भाड भएको पाइए`काले सचेत हुन स्था`नीय प्रशासनले अनुरोध समेत गरेको छ । भित्री सडकमा बिहान १० बजे सम्म अत्याव श्यक वस्तु खरिदका लागि खुला गर्ने गरिएको छ । त्यस पछि प्रहरीले स्थानीय लाई हटाउने र पसल बन्द गर्दै आएका छन् । तर प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
सङ्क्र`मण दर बढ्दै गएकाले सरकारले बन्दाब न्दीको अवधि थप्दै आएको छ भने विकास निर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रको काम कारवाहीमा खुकुलो बनाउँदै आएको छ । तर आवागमनमा भने अझै कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बन्दाबन्दी कायमै राखिएको हो ।
मुलुक`मा कोभि`ड–१९ का कारण हाल सम्म आठ जनाले ज्या`न गुमाएका छन् भने २ हजार भन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखिइसकिएको छ । पछिल्ला केही दिनमा भने तीन अङ्कको सङ्क्रमण वृद्धिदर छ ।